Ziva kuti inguva yakareba sei maitiro anga achimhanya pane Linux | Linux Vakapindwa muropa
Vese vanotoziva GNU / Linux kana Unix masystem achaziva iyo ps kuraira iyo inotibvumidza isu kutarisa maitiro, pamwe nezvimwe zvirongwa zvinotibvumidza kuti tishande neakavhurika maitiro mune yedu yekushandisa system. Zvakanaka, isu takatoburitsa mamwe maitirwo ekuti tiite mamwe manejimendi ane chekuita nemaitiro, asi nhasi tichaisa nyaya ino kuti tigadzire posvo yatichazotsanangura nhanho nhanho uye nenzira yakapusa kuti ungazive sei kuuraya. nguva yekuita yanga ichishanda.
Pane dzimwe nguva isu hatizongo fanirwa kuziva ruzivo senge mafaera akavhurwa ne process kana PID yayo kushandisa yekuuraya raira uye kuuraya maitiro, nezvimwe. Asi pane nguva dzatinofanira kuzivawo kuti maitiro anga achimhanya kwenguva yakareba sei. Semuenzaniso, kana iri nzira isinganzwisisike, ziva kuti yakashanda kwenguva yakareba sei. Sezvo inogona kuve imwe mhando yemarware kana kuti yakatangwa kumashure mumasisitimu edu kuita chimwe chinhu chisingadiwe.Kuziva iyo nguva isu tichaziva kukura kwekukuvara. Uye uyu unongova muenzaniso, panogona kunge paine dzakawanda zvimwe zviitiko kwatinofanira kuziva nguva yekuurayiwa. Zvakanaka, pane izvo isu tichazongoda chete iyo ps kuraira uye zvakare pdof. Zvatichaita kushandisa chechipiri kuziva PID yemaitiro atinoda kutarisa. Zviripachena, dai yaive nzira isinganzwisisike, pangadai pasina sarudzo kunze kwekutarisa ese anoshanda maitiro uye nekuaona iwo nemaoko ... Asi mune iyo yekuzivikanwa software:
Mune ino kesi, iyo inodzosera iyo PID yekuita yeiyo HTTP daemon, asi kana iwe uchida kutsvaga imwe chirongwa, shandisa zita rayo pachinzvimbo cheiyi. Ngatimbofungidzirai kuti inodzosera iyo PID 8735. Zvakanaka, zvinotevera ndezvekushandisa ps kuona nguva pamwe nesarudzo yeetime:
Uye ichatipa iwo mazuva, maawa, maminetsi nemasekondi zvaanga achimhanya. Kana iwe uchida kuratidza iyo nguva mumasekondi kwete muDD-HH: MM: SS fomati, saka shandisa sarudzo etimes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Ziva kuti inguva yakareba sei maitiro anga achimhanya paLinux